Shiinaha Customized bac bac-saareyaasha, shirkado cusub, Warshad - Xigasho - Xakamaynta MIMO FLOW
Hoyga > > Bac caag ah > Bacda PE
qalabka dharka malaa'igta co., LTD. Ma shirkad ku takhasustay soo saarista noocyada kala duwan ee PE, PP, bacda OPP iyo boorsada gacanta, bacda dhammaan noocyada bacaha balaastigga ah ee warshadaha iyo ganacsiga iyo dhammaan noocyada bacaha moodada, boorsada la isku qurxiyo, bacda aan tolnayn, dusha bacda, bacda wax lagu iibsado ee deegaanka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee alaabada baakadaha lagu rido ganacsiga,
Hordhaca wax soo saarka eeBacda PE:
qalabka dharka malaa'igta co., LTD. Ma shirkad ku takhasustay soo saarista noocyada kala duwan ee PE, PP, bacda OPP iyo boorsada gacanta, bacda dhammaan noocyada bacaha balaastiga ah ee warshadaha iyo ganacsiga iyo dhammaan noocyada bacaha moodada, boorsada la isku qurxiyo, bacda aan tolnayn, bacda, bacda wax lagu iibsado ee deegaanka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee alaabada baakadaha ee ganacsiga, alaabada si ballaaran loogu isticmaalo dukaamada waaweyn, cuntada, daryeelka caafimaadka, saabuunta dharka lagu qurxiyo, warqadda musqusha, dharka dharka, alaabada guryaha, elektarooniga, isgaarsiinta, alaabta carruurtu ku ciyaarto, hadiyado, caag birta iyo warshadaha kale.Dhammaan alaabooyinka shirkaddu waxay dhaafeen tijaabooyinka sunta sunta ah ama sunta yar ee ilaalinta deegaanka ee Yurub, Mareykanka iyo Japan.
2. Xuduudaha alaabta eeBacda PE:
290mm * 205mm (cabbirka la habeeyay)
Hal dhinac 0.09 mm (dhumuc ahaan loo habeeyay)
CPE / Dahaadhay ama sida caadadaadu tahay
Daabacaadda jajab ah (illaa 9 midab, daabacaad gaar ah)
Eco-friendly iyo Cunto-fasal
Badanaa waxaa loo isticmaalaa baakadaha hadiyadaha, qurxinta, keydinta, dharka, dharka iwm
Muunad bilaash ah, waxaad u baahan tahay inaad bixiso xamuulka.
Dhoofinta baakadaha caadiga ah
maraakiibta, gaadiidka hawada, xawaaraha caalamiga ah iwm
3. Tilmaamaha isticmaalka sheygaBacda PE:
4.Xirxirida iyo Gaadiidka
Faa'iidooyinkaBacda PE:iftiin iyo hufnaan, qoyaan-caddayn, oksijiin u adkaysta, acid u adkaysta, alkali u adkaysta, cidhiidhi guud oo hawo ah, quwad kulayl aad u fiican iyo waxyaabo kale.
MOQ waa 100pcs. Haddii aad ka yaraato ka dibna 100pcs, wadarta kharashku waa isku mid.
ma siin karno qiimo cayiman illaa aan ka xaqiijino dhammaan waxyaabaha alaabta ka soo baxa sida maaddada, dhumucda, farsamada iyo tirada. Marka fadlan la tasho iibkeena ka hor intaadan amar bixin.
3. AMARKA TUSAALAHA
Calaamadda astaanta gaarka ah waa la soo dhaweynayaa. Waxay ku kacaysaa qiyaastii 40usd, waxay kuxirantahay farsamooyin iyo qalab kala duwan.
Waxaan u soo diri karnaa boorsadeena 'freestock' si aad u tixraacdo (waad iska hubin kartaa saameynta daabacaadda iyo bagquality), Sidan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso khidmadda keenista. Way ka jaban doontaa
Markaad amar bixiso, fadlan u soo dir farshaxanka AI ama faylka PDF iibkeena. Dib u dhigista dirista farshaxanka ayaa dib u dhigeysa keenista. Xaaladaha qaarkood, waxaan ku siin karnaa farshaxan bilaash ah (ka dib bixinta dalabka) naqshadeynta fudud. Warshadu waxay ku sii socon doontaa wax soo saarka badan iyada oo ku saleysan farshaxanka ugu dambeeya ee aad xaqiijisay.
5. WAQTIGII HORUMARKA
Waqtiga hogaaminta wax soo saarka caadiga waa 9-10 maalmood oo shaqo ah. waqtiga dhalmadu waa ilaa 5-7 maalmood oo shaqo.
Boorsada isku dhejiska ah ee OPP